Fanoherana · Desambra, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Fanoherana · Desambra, 2015
Tantara mikasika ny Fanoherana tamin'ny Desambra, 2015
Nataon'ny artista ho lasitra hisiam-piovana nandritra ity 2015 ity izao tontolo izao
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Desambra 2015
Manatona ny taona 2016, ataontsika tamberina ny tantara 16 avy ato amin'ny tahirin-javakanton'ny Global Voices nivoaka tamin'ny fotoana nahamety azy.
Amerika Latina 30 Desambra 2015
Eritreritra tsy tana nataon'ilay mpikatroka mpanao gazety tamin'ny fihaonany tamin'ny masoivoho iraniana nandritra ny lanonana farany taona iray tao New York
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 27 Desambra 2015
" Hamirapiratra ao Iran ny andro rehefa hiarahaba ny vehivavy sy ny mpanao gazety Iraniana tsy misy tahotra na rehareha izy ireo."
Nidina An-dàlambe Ny Haitiana Ho Fanoherana Ny Voka-Pifidianana
Karaiba 25 Desambra 2015
Hamafisin'ny Haitiana fa tsy marina ny vokatry ny fifidianana natao tao amin'ny firenena vao haingana teo, ka nahatonga hetsika goavana an-dàlambe, izay vetivety foana dia nanjary nahery vaika.
Ahoana Ny Fankalazan'ireo Mpikatroka Aziatika Atsimo-Atsinanana Ny Andron'ny Zon'Olombelona
Azia Atsinanana 17 Desambra 2015
Nanakoako manerana an'i Azia Atsimo-atsinanana ny lohahevitra fitadiavan-drariny satria nasongadin'ireo vondrona mpikatroka ny fanitsakitsahan'ny governemantan'izy ireo ny zon'olombelona sy ny fihoara-pahefana ataony.
Bay Area Intifada: Politikan'ny Maha Izy Azy Miaraka Amin'ny Renisoratra ‘I’
Ady & Fifandirana 17 Desambra 2015
Velona ao Oakland, California ny nofinofy amin'ny fanafahana sy fanalàna amin'ny fanjanahana ny Tany an-Dàlam-Pandrosoana.
Fankalazana Niafara Famoretana: Mbola Manao Fihetsiketsehana Ho Amin'ny Fampianarana Tsara Kokoa Ny Mpianatra Ao São Paulo
Amerika Latina 15 Desambra 2015
Nanao fankalazana ny mpianatra ao São Paulo rehefa nahazo fandresena tamin'ny fanoherana ny politika "fandaminana indray" nokasain'ny governora, nanohy ny fihetsiketsehana izy ireo ary niharan'ny herisetran'ny polisy.
Diabe Mitaky ny Tany, ny Rariny ary ny Zon'Olombelona Ataon'ny Kambodziana Na Dia Eo Aza Ny Fanakatsakanan'ny Governemanta
Azia Atsinanana 11 Desambra 2015
Voaràra ny fihetsiketsehana ao amin'ny kianjan'ny fahalalahana ao Phnom Penh ankehitriny, saingy mbola manohy ny diabe manerana ny renivohitra ireo mpikatroka Kambodziana ao amin'ny farintany mba hankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona.